ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको नाम चेन्ज हुने, के राखिदैँछ ? « Lokpath
२२ श्रावण २०७६, बुधबार १४:३४
ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको नाम चेन्ज हुने, के राखिदैँछ ?
प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७६, बुधबार १४:३४
फेसबुक कम्पनीका दुई लोकप्रिय सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको नाम परिवर्तन गराइने भएको छ । यसमा दुवैलाई फेसबुकसँग जोड्दै इन्स्टाग्रामको नाम ‘इन्स्टाग्राम फ्रम फेसबुक’ र ह्वाट्सएपको नाम ‘ह्वाट्सएपफ्रम फेसबुक’ राखिने बताइएको छ ।
कम्पनीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपलाई एउटै ब्रान्डका रुपमा जोड्नका निम्ति यस्तो निर्णय लिएको इन्डिपेन्डेन्टले बताएको छ । ह्वाट्स एप र इन्स्टाग्राम दुवै फेसबुक कम्पनीकै भए पनि तिनलाई छुट्टै एपका रुपमा सञ्चालन गरिँदै आएको थियो ।
फेसबुककै हिस्सा भएको स्पष्ट पार्नका लागि कम्पनीले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपालसँग नमिठो हार ब्यहोरेको भुटानको विगत कस्तो थियो ?
काठमाडौं । घरेलु मैदानमा जारी १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग अन्तर्गत